December 4, 2020 – Kichuu
Why Crisis Group Calls for Inclusive Dialogue in Ethiopia In his introduction to this month’s edition of CrisisWatch, our President Robert Malley reflects on our field analysts’ work, Crisis Group’s mandate, and why we call for [Read More]
Trump Orders All American Troops Out of Somalia While the number of troops — about 700 — is small, it is a continuation of President Trump’s efforts to withdraw the United States from what he [Read More]
Eritrea’s Role in Ethiopia’s Conflict and the Fate of Eritrean Refugees in Ethiopia BY MESFIN HAGOS Debating Ideas is a new section that aims to reflect the values and editorial ethos of the African Arguments book series, [Read More]
Fayyisaa Suphaa – Kankee Keetuma – Oromo Music 2020 [Official Video Fayyisaa Suphaa – Kankee Keetuma – Oromo Music 2020 [Official Video
Prof. Mararaa Guddinaa Say. Ajjeechaa, hidhaa fi ukkaamsaan olaantummaa Nafxanyaa
#Pro_Mararaa_Guddinaa_Say. Ajjeechaa, hidhaa fi ukkaamsaan olaantummaa Nafxanyaa jalatti ummata Oromoo irratti deemaa jiru guyyaatti al 99 Wayyaanee Wayyaanee jechaa oolameef hin golgamu. Waraabessa kaleessa ofirraa ajjeefne abaaruudhaan waraabessa isa har’a nu nyaataa jiru golguu yaaluun [Read More]
Ol aantummaa seeraa mirkaneessuun magaalaa MAQLEE qabachuudhaa?
Motummaan itiyoophiyaa lubbuu nama meeqaatamaan kan lafarraa duguuge meeshaalee waraanaa biliyoonaa shalagamu kan barbadeesse maqalee qabachuuf moo oggantoota #TPLF qabuuf?Ol aantummaa seeraa mirkaneessuun magaalaa #MAQLEE qabachuudhaa? Raaji Maqaleeti taye wanni hin eegamin dargaggooni maqale tarsiimo [Read More]
Odeessa ariifachiisaa! Akka madda qabatamaarraa argannetti humni waraanaa PP galgala kana namoota qabuuf sagantaa akka qaban hubanneerra. Kunis Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Hasaasaa magaalaa Hasaasaatti kan raawwatamuuf jiru akka ta’e beekameera. Magaalaa Hasaasaatti [Read More]
Ragaan Finffineen guutummaa guututti harka Amaaraa galuuf kaartan jarri heyyama Abiyootiin karoorfatte.kinooti
Ragaan #Finffineen guutummaa guututti harka #Amaaraa galuuf kaartan jarri heyyama Abiyootiin karoorfatte.kinooti Oromoon maqaan malee mataan irratti mirga akka hin qabne Argaa jirra.inni ardha kana Gochaa jiru Boru oromiyaa Akka dhuunfatu hin shakkin!! Yaa “”Soogiddaa [Read More]
Raaji Maqaleeti taye wanni hin eegamin dargaggooni maqale tarsiimo qeerroo .
Raaji Maqaleeti taye wanni hin eegamin dargaggooni maqale tarsiimo qeerroo. Geetacho radda TV irrati ODUU Hatattama Bilxigana wal balesa jirachu Oduule Jajjabo lola Tigraay fi jawar kuno | Moha Oromo
UN says fighting continues in many parts of Tigray hampering aid Addis Ababa (AFP) (eritreahub)—-The United Nations said Friday that fighting continued “in many parts” of Ethiopia’s Tigray, complicating efforts to deliver humanitarian aid despite [Read More]